Imicu yamacwecwe okuveliswa kwethenda yeeFektri zeeFektri - China iitshefu zamathambo eziMveliso eziMveliso eziMvelisi kunye nabaxhasi
Kulungile-250 Uhlobo lweeNdlela eziBini eziSantya esiPhezulu seTshefu yeMveliso yeeTishu
UkuSebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo 1.Yamkela u-U kunye nolwakhiwo, ukusonga ngokuqhubekekayo nokupakisha, ukubonakala okuhle, inkqubo yokupakisha egudileyo, uzinzo kunye nolwakhiwo oluthembekileyo. Uxinzelelo 2.Constant ulawulo iphepha ekrwada ebalekayo, inyathelo-ngaphantsi ummiselo wokucoca isantya kwithishyu. 3.Adopt BST iphepha ekrwada ekrwada ewela ukulungisa kwakhona, uhlobo oluncinci kunye nepakeji yohlobo lwethishu esemgangathweni iyasebenza. Umlawuli ocwangcisiweyo we-4 ukulawula ngokukhawuleza, asebenze ngokuthinta isikrini, kunye nomsebenzi we ...
Kulungile-150 Uhlobo lwethishu yeeLisisi zoMbane oMileyo
UkuSebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo 1.Yamkela ulungelelwaniso lwendlela ethe ngqo kunye nolwakhiwo, ukusonga ngokuqhubekayo kunye nokupakisha, ukubonakala okuhle, inkqubo yokupakisha egudileyo, uzinzo kunye nolwakhiwo oluthembekileyo. Uxinzelelo lwe-2. 3.Adopt BST iphepha ekrwada ekrwada ewela ukulungisa kwakhona, uhlobo oluncinci kunye nepakeji yohlobo lwethishu esemgangathweni iyasebenza. Umlawuli onokucwangciswa ukuba enze ukulawula ngamandla, asebenze ngescreen sokuchukumisa, wi ...
I-OK-120 yohlobo lweSantya esiPhezulu seMveliso yeeTishu
UkuSebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo 1.Ukwakha ubeko lobume boMgca, ukusonga okuqhubekayo, ukupakisha, ukubonakala okuhle, ukupakisha okungagungqiyo, ulwakhiwo olomeleleyo noluthembekileyo 2.Ukulawula uxinzelelo oluqhubekayo lokubaleka kwephepha elingasasebenziyo, inyathelo elingaphantsi komgaqo wokucoca isantya kwithishu. 3.Adopt BST iphepha ekrwada ekrwada ewela ukulungisa kwakhona, uhlobo oluncinci kunye nepakeji yohlobo lwethishu esemgangathweni iyasebenza. Umlawuli ocwangcisiweyo we-4 ukulawula ngokukhawuleza, asebenze ngesikrini sokuthinta, kunye nomsebenzi wokubonisa i-fai ...
Uhlobo lwe-Ok-402 Olupheleleyo-oluzenzekelayo itshefu ukugoba umatshini wokupakisha
Ukusebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo Lo matshini usetyenziselwa ukugoba okuzenzekelayo ngaphezulu kohlobo oluqhelekileyo kunye neetshefu zohlobo oluncinci (ukuhlangana). Isebenzisa inkqubo ye-PLC yokulawula ujongano lomatshini womntu, imoto ye-servo ilawula ukuwa kwefilimu kunye nokucaciswa kokuwa kwefilimu kunokulungiswa nakweliphi na inqanaba. Lo matshini, ngokusebenzisa izinto ezimbalwa ukutshintshwa, uyakwazi ukuqhuba iphakheji yesayizi yeetshefu eyahlukileyo (oko kukuthi imigaqo eyahlukileyo). Imodeli kunye nePara yobuGcisa ...
Uhlobo lwe-OK-602M Uhlobo olupheleleyo lwe-Handkerchief Tundue Packing Machine
Ukusebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo Inokusetyenziswa kwindidi ezahlukeneyo zokupakisha, ukuya kuthi ga kwiikholamu ezi-3 × ezi-4 iipakethi × 6 iipakethi ezincinci, kulula ukuzilungisa, ulawulo olupheleleyo lwe-servo, ukongeza ekutshintsheni ukungunda, ezinye izinto zinokuba uhlengahlengiso kwiphaneli yokusebenza. Imodeli kunye neParameter yobuGcisa obuPhambili Imodeli ye-OK-602M ephambili yomzobo womzimba (mm) 3700x1160x1780 Isantya (iingxowa / imin) 1 umqolo 3 izaleko: iingxowa ezingama-90 / imiz ...